CIN Khabar नेपालमा आयो सलह किराको बथान
नेपालमा आयो सलह किराको बथान अब कसरी गर्ने नियन्त्रण ? सरकार भन्छः नियन्त्रणको उपाय तयार छ
सीआईएन शनिबार, असार १३, २०७७, ०७:११:००
काठमाडौं । नेपालमा सलह किरा प्रवेश गरेको छ । दुई दिनयता दक्षिणबाट उत्तरतिर हावा बहँदा भारतको बिहार हुँदै सलह, नेपाल प्रवेश गरेको नेपालका कृषि वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
आज दिउँसो रुपन्देहीको बुटवल लगाएतका क्षेत्रमा देखिएको सलह विहान प्रदेश २ का बारा, पर्सा र सर्लाही लगाएतका जिल्लामा देखिएको थियो ।
अफ्रिकी मुलुकबाट अरबियन देश हुँदै एसियाको इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतसम्म आइपुगेको सलह किरा नेपाल भित्रिएको हो ।
एकाविहानै पर्सा र बाराको आकाश हुँदै सलह उत्तर तिर लागेको निजगढका किसान रामप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो । ६० वर्ष अघि नेपालमा सलह आएको थियो । त्यसबेला अनिकाल ब्यहोरेका मानिस अहिले पनि भेटिन्छन् ।
सलहले हरियो बोट विरुवा उजाड हुने गरी खाईदिने भएकाले किसानलाई बाली कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता शुरु भएको छ ।
सलहले आज साँझसम्म बारा र पर्सा क्षेत्रको बाली नालीमा क्षति पुर्याएको छैन । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कृषि शाखाका प्राविधिक धिरज पौडेलले अहिले सम्म यो किरा घास र पातहरुमा बसिरहेको देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा सलह भित्रिएको पुष्टि भएपछि प्राविधिकहरुले अध्ययन सुरु गरिसकेका छन् । पहिलो चरणमा गरिएको अध्ययनअ नुसार हावाले छुट्टिएको एक झुण्ड नेपाल प्रवेश गरेको हुनसक्ने कृषि प्राविधिकको अनुमान छ ।
नेपालमा छिर्दै भोकमरी ल्याउने किरा
तीन हप्ता अघि मात्रै कृषि मन्त्रालयले नेपालमा सलह नभित्रिने बताएको थियो । तर रुपन्देही, नवलपरासी, बारा, पर्सा, रौतहट लगाएतका जिल्लामा सलह किराको झुण्ड देखिएपछि मन्त्रालयको अनुमान गलत साबित भएको छ ।
सलह आउँदैन भनेर तयारी बिनै ढुक्कले बसेको मन्त्रालय अब के गर्छ ? सीआईएनसंग कुराकानी गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि बहादुर केसीले सलहको नियन्त्रणको लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिनै सरकारले नै सलहबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्नको बिषादी छर्ने, प्राबिधकहरुको टोली खटाउने लगाएतको काम गरिसकेको छ ।
नेपालमा सलह भित्रिएपछि कृषि मन्त्रालय माताहतका एक दर्जनबढी विज्ञले पाकिस्तानी वैज्ञानिकसँग सलह नियन्त्रण उपायबारे परामर्श लिएका छन् ।
नेपालमा सलह भित्रिएपछि कृषि मन्त्रालय माताहतका एक दर्जनबढी विज्ञले पाकिस्तानी वैज्ञानिकसँग सलह नियन्त्रण उपायबारे परामर्श लिएका छन् । सलह नियन्त्रणमा सफलता हात पारेका पाकिस्तानी किट वैज्ञानिकसँग दुई घण्टा भिडियो माध्यमबाट छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो । बैज्ञानिकहरुले नेपालमा यो किरा हावाको झोका संगै प्रवेश गरेको हुन सक्ने र यसको सङ्ख्या त्यति धेरै नभएको तथा यसबाट क्षति पनि धेरै नहुने भन्दै नआत्तिन सुझाब दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत मानवको खाद्यान्नमा सलहको असर देखिन सक्ने अनुमान गरेको छ । फौजी किराले मकै नष्ट पारेपछि हैरान भएका किसान फेरि सलहबाट खेती, बाली कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।
सलहलाइ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
सलहलाइ बिभिन्न तरिकाले धपाउन सकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । हुललाइ तितर, बितर पारेर, आगो बालेर, धुँवा निकालेर यसबाट हुन सक्ने क्षति घटाउन सकिन्छ ।
हाँसको प्रयोग गरेर पनि यो किरा कम गर्न सकिन्छ । हाँसले यो किरालाइ खाइदिन्छ । एक हाँसले दिनमा २ सय सलह खाने भएकाले चीनले केही समय अघि सलहसँग लड्न पाकिस्तानलाई एक लाख हाँस पठाएको थियो ।
यस्तै माकुरा तथा छेपारोले पनि यो सलह किरा खान्छ । यसैगरि थाल ठटाएर, ड्रम बजाएर, चर्को स्वरमा स्पिकर बजाएर पनि यो किरालाइ भगाउन सकिन्छ । यस्तै किटनासकको प्रयोगबाट पनि यसलाइ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १३, २०७७, ०७:११:००
विपद्को बेला कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
सय वर्षीय बृद्धले जिते संक्रमण, मनाए जन्मदिन
कर्णाली प्रदेश सभाका एक सांसदलाई कोरोना सङ्क्रमण
बर्षेनी डुब्छन् प्रदेश २ का जिल्ला
१० हजारभन्दा बढी निको भए, पाँच जिल्ला कोरोना मुक्त
सीटीईभीटी र राष्ट्रिय युवा परिषदबीच सहमति
निरन्तरको वर्षाले देशभर बाढि र पहिरोको कहर छ । कतै डुबान छ भने घर, भवन, सडक र पुल भत्किएका छन् । २ घण्टा
विश्वमै तेस्रो बढी प्रभावित भएको भारतमा मुम्बइ उच्च प्रभावित क्षेत्र हो। तर, मंगलबार त्यहाँ एक सय वर्षीय बृद्धले सङ्क्रमण जितेका छन्। सय वर्षीय बृद्ध अर्जुन गोविन्द नारिनग्रेकर संक्रमणबाट निको भएका छन्। २ घण्टा
कर्णाली प्रदेश सभाका एक सांसदलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा एक प्रदेश सभा सदस्यलाई कोरोना सङ्क्रमण पृष्टि भएको हो । ३ घण्टा
© CIN Khabar -2020 All rights reserved. Site by: SoftNEP